Haxxummaa fi Malaamaltummaa Mootota Habashaa « QEERROO
Haayile Selaaseen Mo’aa Lenca Yihuundaa Mootii moototaa kan Waaqayyon muude godhee of dhiyeessaa ture. Haxxummaa kana keessaa bu’ura dubbii guddaa lamatu jira. Inni duraa kan Waaqayyo muude namni xuqquu hin danda’u yaada jedhuuf kan xiyyeefatame dha. Inni lamaffaa Lunca Yihuudaa yaroo jedhu an isin keessaa iyyuu hin dhalanne, isin bituuf ergamaa Waaqayyoo waanan taheef na sodaachuu fi na kabajuu qabduu dha. Kunis uummata bitaa jiru irratti humna aangoo akka kennuuf kan tilmaame dha . Kana irratti Haayile Selaaseen ofumaanuu an jedhee of hin waamu. Yaroo hundaa nuyi jedhee of waama. Maal jechuu isaati? Tokkoo isa inni lamaffaa eenyuu? Waaqa isa muude jechuu isaati laata? Jechi isaa kun mala guddaa of keessaa akka qabu ni agarra.Mootonni Habashaa haxxummaa fi malaamaltummaan akkataa itti uummata cabsuu fi bituu danda’an wal duraa booda wal irraa barachaa, wal dhaalaa amma guyyaa har’aa gahanii jiru. Malaamaltummaan tokkoof hojjete isa biraa hin hojjetu. Inni Itti aanu immoo haxxumaa biraan as bahuu qaba.
Mootummaan Haayile Selaase bartoota ajjeeseera. Bartoota mana hidhaa keessatti dareera. Naamoota Orommo waraa uummata isanii dhukbsatan hidhuu fi ajjeessuu hin dhifne.Haa tahu malee utuu rasaani tokko illee hin dhuka’iin fincila uummatni kufe. Yaroo sanatti warri waraanaa aangoo qabachuu fala dha’uu jalqaban. Tooftaan duraa gaaffii nama hundaa kan tahe lafa qotatee bulaaf kennu dha. Inni lamaffaa Waaqayyoottu na muude jechuun akka hin baafne waan hubataniif idoyologii komuniziim ergifachuu filatan. Waa’een lafaa mormii guddaa jiru qabannese amma humna horatani itti gargaramanii jiru. Idoyologii komuniziim garuu meshaa guddaa ittiin aadaa, hoodaa fi amantii uummataa balleessan taheef jira. Jartii fi jaarsi, ayyaantuun, Sheekni fi lubni dhageetii dhaban. Safuu fi laguunkan uummata keenyaf hundee jiruu fi jireenyaa tahe ni bade. Obboleessi obboleessa irratti ka’e. Ilmi abba irratti ka’e. Intalli haadha irratti kaate. Lammiin wal irratti du’u wal irratti bobba’e. Olaan olaa irratti ka’e. Namni Oromoo akka wal hin ammanne, akka waliin hin dhaabbanne akka wal shakkuu godhan. Jabeenya uummatni keenya kan tahe safuu fi laguun dhibamuun tokkummaan uumata keenyaa akka diigamu godhe. Ummatni keenya waaqa irraa fagachaa deeme. Yaroo kana Waaqayyo illee akka nu irraa ilaalu mamuu hin qabnu.Dargiin ijoollee eenyumaa ishee iyyuu hin barrennetti kilaashinkoov kennee akka uummata salphisaanii fi mootummaa isaa tiksaniif dabbaloota uummta keessa facaase.
Hammeenya mootota Habashaa ibsuuf kitaaba mataa isaa danda’e waa’ee tokko tokkoo isaanii bareessuun ni barbaachisa. Isa kana bartoota seenaa qortaniif yoon dhiisii darbe garii natti fakkaata. Yaadni koo kamitu nuuf wayyaadha jechufis miti. Diinni diina. Diinni wayyaa’aa hin qabu. Mootummaan Darii maqaa idolojii komunizmiin Safuu fi laguuuummata Oromoo diiguun amma har’aa diina caalaa uummatni keenya wal irratti bobaa’uuf sababa tahee jira. Ijaarsonni Oromoo ni diigamu. Haawasni Oromoo bakka hundatti ni faca’a. Waldaan amantiis hammaccamaa jira. Kana hundaaf itti gaafatama kan qabu dhaloota Dargii jalatti diigaa barate. Dhiphuun uummata isaanii itti hin dhaga’amuu. Inni diinni saba isaanii lafaa irraa dugugaa jiru itti hin mul’atu. Maaliif yoo jenne? isaanis isuma har’a motummaan TPLF uummata Oromoo irratti hojjechaa jiru uummata Oromoo irratti waan hojjechaa turaniif isaaniif waan haaraa miti.
« Who is Pathogen?
Godina Gujii keessatti Qeerroon Bilisummaa waraqaa waamichaa facaasaa jira. »